Ngasemva kwesandla sakho - ii-Geofumadas
Matshi, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ngamanye amaxesha ndandichukumise isandla sakho, andazi ukuba bangaphi, andiyazi ukuba baninzi, akakaze, akusoze, mhlawumbi akaze athande oko. Kodwa ukudideka kokuqalisa lo mbhalo kufuneke kungadingekile xa oko bekuye kwasayi kubaluleka kunye neyona nto ibaluleke kakhulu eyonakalisa imbali yento engekho. Akunjalo, akunjalo.
Iqale kunye touch elingenatyala ekupheleni kuzipho nakwiinzipho zethu, elide yaye ubuncwane bakho, ngenxa yam, isimiso, bonke jest yedijithali umboniso qhagamshelana ET squeaky, ungakhululekanga, eliqhelekileyo, funny kancinane. eklasini kwekhaphethi static wenza yokudanyaza okungephi falenge wesithathu, nje xa ngokundibamba llemas, nto leyo eyenzekayo kum lonke ixesha umkhwa wam mmangalelwa itemplates rhoqo lakho lomculo. Kuphela kwaphela, kwakungekho.
Ngomso emva kokushiya i-Datashow ukufudumala indlebe zam, ukungathembeki ukuphela ngoMgqibelo, ukuhleka kweefoto zamanye amaxesha angayi kubuya. Ilixa lafika, emini, ebusuku, njengokungathi yonke into yayingenye imini. Ukulinda isidlo, ukuba ufike, ukuba uhleke. Kwakhona, ukubingelela kwisandla esinamahloni, ukuhleka okungenakukupheka kobomi, ukujonga ngokunyanisekileyo kwintlonipho, ukukhathalela okumele kufikelelwe kuyo.
Kodwa emnyango emnyama elo gumbi, kunye Bower zomdiliya phezulu zidlakadlaka Ndava ukuchukumisa gentle ye umntla esandleni sakho kwi sam. Ngokukhawuleza okanye kamva, ngesimo esifanayo kunye nesona sikhulu sokuhlala esihlalweni sam semoto; enye ye-ida, enye yeza, ithambile kwaye ingenacala kwintlupheko ye-portal kunye nokulumkisa kwinqanaba elingaqinisekanga lamatye. Kwaba ebandayo va yesikhumba sakho ezithambileyo nje kwaneenwele 19 1.83 iisentimitha isikweri emva esandleni sam. Xa nokushiywa lwe logarithm olusezantsi ukuba bristled ethwele imvakalelo yi-follicle, ukuya isiseko, asabela gooseflesh bagqitha corneum, ezinawo spinosum kunye bone iqonda yaye ekugqibeleni besila ngamandla scaphoid. Ke ngokuqinisekileyo ezinkulu, uqhagamshelo olukhulu kangako kodwa ofana ebaxiweyo rhoqo ukuba ukulibala bomda.
Kwakuyibuyiselo elingalindelekanga kwixesha lam ebuntwaneni xa ndicinga ukuba ndikubone kwenye indawo. Ngokumomotheka okufanayo, ukugcoba umsila we-soda, ngelixa unamehlo wandijonga ngathi ngokungabikho mntu ukhona. Zazingekho nezinye izinto, xa ubuya Sibonile ngamabona ezi amathuba, kunye incasa embi wendlela enothuli xa abantu ukulibala slouch uyadika mgama kunye. Njengokuba kude njengoko iingcinga, njengokuba liyabanda cordiality, ngenye imini, omnye ubusuku, omnye ngoLwesihlanu usikhathalele ... musa ukuya ... ndingawulibali ...
Ngakubona ukuba ncwadi trarrosque reverse otshisa ngobunzulu yesikhumba sakho ethambileyo, njengoko bafuduka senguquko engasekhoyo ngaphandle ebalulekileyo yenziwe, umfowunelwa ukusuka yokuhlasela metacarpal @gotado ukuba iqala phi eli bali. Le nto okanye enye, eyakho, yam, nobomi. Wonke isentimitha le umva wesandla sakho wandikhumbuza ukuba zikhona mna, xa imvakalelo elingalibalekiyo ngobusuku ngoLwesibini, hayi oku, hayi yokugqibela ezimbini.
Emva koko ndalikhumbula. Ukuthandana kwam ngasemva kwesandla sakho kumthintela, ngaphandle kokufuna okanye ukufuna ukubetha kwakho kwe-eyelash ekhohlo, apho kukho kubonakala kukho i-mole ne-just before phambi kweenwele ebusweni bakho; Akuninzi, kungabi ninzi, qhawula nge-strand. Uvakalelo olufanayo olubangela uMgqibelo emva kwemini, ngomzwelo weLwesine owawuphelile, xa yonke into ibonakala iyinto efanayo. Ukwamukelwa kwemeko, kunye nehlazo elihle ukufihla uxinzelelo kwaye kwakhona, loo mvakalelo kukuba yonke into iya kuba yinto efanayo. Kwakhona, kungekhona into entsha, kunye nenkumbulo yaloo mzuzu eyadlula i-sublime.
Ngaphandle nangenathemba lokuba kuya kubakho enye, ingcono. Ngomva wesandla sakho, ngolunye uMvulo, onjengezoLwesibili, ewe njengabo, kungekhona nabani na.
Post edlulileyo«Edlulileyo Amanzi kunye neemephu. com
Post Next I-Course kwi-Infatistructures Data (IDE) ngeSaphulelo se-50%Okulandelayo "